ထိုင်ဝမ်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး HTC သည်၎င်း၏စမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကအတည်ပြုခဲ့သည်။ HTC U12 + (U12 Plus) ကိုယခုလမေလ ၂၃ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ပြသမည်ဖြစ်သည် ဒီအထင်ကရသစ်ကိုငါတို့အဘို့ပြင်ဆင်သောသတင်းအားလုံးနှင့်အတူ။
ဒီ high-end ဟာရှစ် core Core Qualcomm Snapdragon 845 နဲ့အတူဈေးကွက်ထဲကိုရောက်ရှိလာမှာပါစျေးကွက်ရှိအခြားမည်သည့်အရာကိုမဆိုမငြူစူနိုင်သောအရည်အသွေးကောင်းသည့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုနှင့်အမှတ်တံဆိပ်၏ရောင်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးမည့်အခြားအရည်အသွေးများနှင့်အတူ ... သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကကျော်ကြားသောပြင်သစ်လူမျိုးတစ် ဦး ဖြစ်သူ Roland Quant မှထုတ်ဖော်ပြသထားသည့်အချက်အလက်များအရ၎င်းသည်တင်ပြပြီးသားအများအပြားကိုအတည်ပြုနိုင်သည် ဤဆောင်ပါး, HTC U12 + တွင် Super LCD6 panel တပ်ဆင်ထားပြီး WQHD + resolution 2.280 x 1.440 pixels ရှိပြီးကျစ်လျစ်ပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိပြီး 18:9screen format ရှိသည်။ အကြောင်း, ဒီနေ့, ငါတို့လေ့မြင်။ ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့အဲဒီမှာတက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့သကဲ့သို့ ၎င်းတွင်ရှစ်ခုပါဝင်သည့် Qualcomm Snapdragon 845 SoC (4x Kyro 385 တွင် 2.8GHz နှင့် 4x Kyro 385) 1.8GHz ဖြင့် 64-bit ဗိသုကာနှင့် 10nm ပါဝင်မည် ၎င်းတွင် 6GB RAM၊ 128GB Internal Storage သိုလှောင်မှုပမာဏနှင့် 2TB အထိသိုလှောင်နိုင်မှုနှင့် 3.500mAh ဘက်ထရီတို့ပါ ၀ င်သည်။
- Roland Quandt (@rquandt) မေလ 22, 2018
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Android 8.0 Oreo ကိုအသုံးပြုထားသည်၎င်းတွင် BoomSound စပီကာများ၊ ကျောဘက်၌လက်ဗွေဖတ်စနစ်တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၁၅၆.၆ x ၇၃.၉ x ၉.၇ မီလီမီတာ၊ အလေးချိန် ၁၈၈ ဂရမ်၊ အနောက်ဘက်တွင် 12 megapixels ရှိသည့် aperturef/ 1.75 နှင့် 16 Mpx aperturef/ 2.6 ပါ ၀ င်သောရှေ့ကင်မရာတွင်ရှေ့ကင်မရာသည် 8MP + 8MP အာရုံခံကိရိယာနှစ်ခုကိုလည်းတပ်ဆင်ထားသည်။.
HTC U12 + စျေးနှုန်း
မှတ်စုများအရ 6GB ROM နှင့်အတူ 128GB RAM အမျိုးအစားသည်ယွမ် ၅,၈၈၈ ခန့်ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းမှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ယူရို ၇၈၀ ခန့်ရှိသည်။။ ၎င်းသည်အနက်ရောင် (Ceramic အနက်ရောင်)၊ အနီရောင် (Flame Red) နှင့်အပြာရောင် (Perspective အပြာရောင်) ဖြင့်ရောက်ရှိမည်။ ယခုလက်ရှိတွင် 64GB သိုလှောင်မှုပမာဏရှိသောဗားရှင်းတစ်ခုရောက်ရှိလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များမရရှိသေးပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » NOTICIAS » HTC U12 + - အသစ်ပေါက်ကြားခဲ့သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ…ယင်း၏စျေးနှုန်းသည်အလွန်!
မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုစနစ်သည် Mate9နှင့် Mate9Pro တို့ကိုရရှိသည်